चिसो बाट बच्न कस्ता खानेकुरा खाने त! – Samabeshi Khabar
चिसो बाट बच्न कस्ता खानेकुरा खाने त!
२३ पुष २०७७, बिहीबार १५:२४ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं, पुस २३ (ससं) । जाडोको समयमा केटा केटि देखि बुढा बुढि सम्मलाई चिसोले सताउने गर्दछ । चिसोबाट बच्न हामी आगो ताप्ने, हिटर ताप्ने गर्छौ । तर, यो स्वास्थ्यको हिसावले लाभदायक मानिँदैन । अझ काठमाडौं उपत्यकामा एकाएक वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढेसँगै चिकित्सकहरुले आगो नताप्न र धुवा धुलोबाट बच्न सचेत गराएका छन् ।
यतिवेला देशभरको मौसम बदलि भएको छ । चिसो ह्वात्तै बढेको छ । उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात भएको छ । सँगै पश्चिमी वायुको प्रभावले काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम बढेको छ भने वायु अत्यधिक प्रदूषित बनेको छ । यही साता काठमाडौंको वायु प्रदूषणको तह विश्वमै नम्बर एकमा पुग्यो । कोरोनाभाइरसको महामारीमा वायु प्रदूषण अनि चिसोले जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर पुर्याउन सक्ने भन्दै चिकित्सकहरुले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।